Puntland Oo Baareysa Weerarkii Ka Dhacay Boosaaso. – SBC
Puntland Oo Baareysa Weerarkii Ka Dhacay Boosaaso.
Wasiirka Wasaaradda Amniga ee Puntland C/laahi Axmed Yuusuf “Dowlad” ayaa sheegay in ay wadaan baaritaan dheeri ah oo ku aadan weerarkii dhawaan ka dhacay duleedka Magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari.
Waxaana uu tilmaamay in saraakiisha ammaanka Puntland ay ku howlanyihiin baaritaanka weerarkaasi oo ay dagaalyahanno ka tirsan Al Shabaab ku qaadeen Bar Control oo ay ku suganaayeen ciidanka Puntland.
Sidoo kale Wasiirka Amniga ee Puntland C/laahi Axmed Yuusuf “Dowlad” ayaa ku booriyay saraakiisha ciidamada in ay uu muujiyaan feejignaan dheeri ah, si looga hortago weerarada Al Shabaab.
Wasiirka Ayaa Mar wax laga weydiiyay Waxa hortaagan In ay Tagaan meelaha ay ku suganyihiin Al-Shabaab ee ku yaala Puntland, gaar ahaana Buuraha Gal-gala ayaa sheegay iney puntland horay oga guuleysan jirtay iyado aysan Jirin Ciidan shi sheeye oo ku sugan Deegaanadeeda,
Xarakada Al Shabaab ayaa sheegatay masuuliyadda weerarkaasi oo Habeen ka hor ka dhacay Magaalada Boosaaso, waxaana ay shaaciyeen in halkaasi ay ku dileen 7 Askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka Puntland.